Top 5 nddị 2021 na Digital Asset Management (DAM) Na-eme Na XNUMX | Martech Zone
Na-abanye na 2021, enwere ụfọdụ ọganihu na - eme Njikwa Akụrụngwa (DAM) ụlọ ọrụ.
Na 2020 anyị hụrụ oke mgbanwe n'omume ọrụ na omume ndị ahịa n'ihi covid-19. Dị ka Deloitte si kwuo, ọnụ ọgụgụ ndị na-arụ ọrụ n'ụlọ si okpukpu abụọ na Switzerland n'oge ọrịa a na-efe efe. E nwekwara ihe mere ikwere na nsogbu ga-akpata a na-adịgide adịgide na-arụ ọrụ dịpụrụ adịpụ na ọkwa ụwa. McKinsey na-akọkwa banyere ndị na-azụ ahịa na-agbanye mmụba na ọrụ dijitalụ ma ọ bụ usoro ịzụta, na ogo dị ukwuu na 2020 karịa nke mbụ, na-emetụta ma B2B na ụlọ ọrụ B2C.
Maka ebumnuche ndị a na ndị ọzọ, anyị na-amalite 2021 na ntọala dị iche iche karịa ka anyị ga-atụ anya otu afọ gara aga. Agbanyeghi na itinye digitising abụrụla ihe na - aga n’ihu kemgbe ọtụtụ afọ ugbu a, enwere ihe kpatara n’atụ anya na mkpa ọ ga - abawanye n’afọ na - abịa. Na otutu mmadu na - aru ​​oru - na ahia na ihe ahia ana azuta ma duzie na ntaneti rue ogo - anyi n’atu anya ihu onu ogugu nke onu ogugu dijitalụ na mkpa nkwado software. Ya mere, o doro anya na Digital Software Management Software ga-abụ usoro ọrụ dị mkpa maka ọtụtụ azụmaahịa na ụlọ ọrụ n'afọ na-abịa.
N'isiokwu a, anyị ga-eleba anya na ihe 2021 ga-echekwa maka nyiwe Digital Asset Management na ị ga-edepụta usoro 5 kachasị elu nke anyị kwenyere ga-abụ ndị a kacha mara amara maka afọ a.
1zọ XNUMX: Agagharị na Digital Asset Management
Ọ bụrụ na 2020 akụziworo anyị otu ihe, ọ bụ mkpa ọ dị ịdị na-agbanwe agbanwe n ’ọrụ ọrụ. Inwe ike ịrụ ọrụ nke ọma yana site na ngwaọrụ dịgasị iche iche, abụrụla uru ịbụ ihe dị mkpa maka ọtụtụ azụmaahịa na nzukọ.
Ọ bụ ezie na nyiwe DAM na-enyere ndị mmadụ na òtù dị iche iche aka ịrụ ọrụ ruo ogologo oge, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ikwere na ndị na-eweta ngwanrọ ga-akwalite ọrụ siri ike n'ọtụtụ ogo. Nke a gụnyere imeziwanye ọtụtụ ọrụ DAM, dịka iji ngwaọrụ mkpanaka site na ngwa ma ọ bụ ịkwado maka nchekwa igwe ojii site na ngwanrọ dị ka Ọrụ (SaaS).
Na Foto Foto, anyị amaliteworị ịkwadebe maka ndị na-achọ mgbanwe ka ukwuu. Na mgbakwunye na ịbawanye na elekwasị anya na SaaS, anyị mekwara ngwa mkpanaka ọhụụ na August nke 2020, na-enyere ndị otu aka ịnweta ma jiri DAM na njem. site na ekwentị ha.
Nddị 2: Nchịkwa ikike na Consdị Nkwenye
Kemgbe iwu EU GDPR malitere na 2018, mkpawanye ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ na-agbaso ọdịnaya na nkwenye ha. N'agbanyeghị nke ahụ, mmadụ nwere ike ịchọta ọtụtụ ụlọ ọrụ na-agbasi mbọ ike ịchọta ụzọ isi rube isi n'iwu ndị a nke ọma.
N'afọ gara aga, anyị enyerela ọtụtụ ndị ọrụ DAM aka ịhazi arụmọrụ ka ha dozie nsogbu metụtara GDPR, na nke a kwesiri ịbụ ihe a ma ama na 2021. Site na otu ndị otu na-ebute njikwa ikike na GDPR, anyị kwenyere na ụdị nkwenye iji nwee ebe dị elu na ndepụta nke ọtụtụ ndị nwere mmasị.
30% nke ndị ọrụ DAM weere njikwa ikike ikike oyiyi dị ka otu isi uru.
Site na ntinye nke ụdị nkwenye dijitalụ, nke a kwesịrị ịbụ arụmọrụ nke ike ka ukwuu, ọ bụghị naanị maka ijikwa GDPR, kama maka ọtụtụ ụdị ikike oyiyi.
Ndzọ 3: Njikọ Njikọ Ihe Onwunwe Digital
Ọrụ bụ isi nke DAM bụ ịchekwa oge na mbọ. Njikọ dị oke mkpa maka ọganiihu DAM, ebe ọ bụ na ha na-enyere ndị ọrụ aka iweghachite akụ ozugbo n'elu ikpo okwu mgbe ha na-arụ ọrụ na mmemme ndị ọzọ, nke ọtụtụ na-eme ọtụtụ.
Brandsdị ndị na-arụ ọrụ dị elu na-esi n'ebe ndị na-ere ahịa na-ere ahịa, na-ebute ndị na-eweta ngwanrọ nọọrọ onwe ha kama.
Obi abụọ adịghị ya na ọtụtụ uru dị na ịtụtụ na ịhọrọ software kama ijikọ gị na otu ndị na-ere ma ọ bụ abụọ. Agbanyeghị, njikọta ziri ezi ga-adịrịrị ka ụlọ ọrụ nweta ọtụtụ ngwanrọ nke onwe ha. API na plugins bụ ihe dị oké mkpa itinye ego maka onye ọ bụla na-eweta ngwanrọ na-achọ ịdị mkpa ma ga-anọgide na-adị mkpa site na 2021.
Na FotoWare, anyị na-achọpụta nke anyị plugins maka Adobe Creative Cloud na Microsoft Office ịbụ ndị a ma ama n'etiti ndị ahịa, yana njikọta na usoro PIM ma ọ bụ CMS nke nzukọ. Nke a bụ n'ihi na ọtụtụ ndị na-ere ahịa ga-eji akụ dị iche iche rụọ ọtụtụ mmemme na ngwanrọ dị iche iche. Site n'inwe njikọta na ebe, anyị nwere ike iwepụ mkpa ọ dị ibudata na ibudata faịlụ mgbe niile.
Tredị nke 4: ọgụgụ isi (AI) na Digital Asset Management
Otu ọrụ na-ewe oge mgbe ị na-arụ ọrụ na DAM nwere njikọta ịgbakwunye metadata. Site na itinye AI n'ọrụ - ma mee ka ha nwee ike ịrụ ọrụ a - enwere ike belata ọnụahịa metụtara oge ọbụla. Ka ọ dị ugbu a, ndị ọrụ DAM pere mpe na-erite uru na teknụzụ a.
Dị ka Nnyocha ụlọ ọrụ FotoWare site na 2020:
Naanị 6% nke ndị ọrụ DAM etinyeworị ego na AI. Agbanyeghị, 100% na-eme atụmatụ itinye ya n’ihu, nke ga - eme ka ha bawanye uru nke DAM ha.
75% enweghị oge ahọpụtara maka mgbe mmejuputa a ga-ewere ọnọdụ, na-atụ aro na ha nwere ike na-eche maka teknụzụ iji meziwanye, ma ọ bụ na ha nwere ike ọ gaghị ama maka ohere dị ugbu a n'ahịa.
Mwekota na ndị na-ere ahịa nke atọ na onye na-eweta AI, Imagga, dị adị na FotoWare, anyị kwenyere na ụdị ihe a ga-eme ka ewu ewu ya. Karịsịa ebe ọ bụ na AI na-emewanyewanye oge niile ma na-enwe ike ịmatakwu isiokwu ndị ọzọ ka oge na-aga, na ime nke a n'ụzọ zuru ezu.
Ka ọ dị ugbu a, ha nwere ike ịmata ma jiri akara agba ziri ezi wepụta ihe oyiyi, mana ndị mmepe ka na-arụ ọrụ na-eme ka ha mata nka, nke ga-abụ ihe zuru oke maka ụlọ ngosi ihe mgbe ochie na veranda. Ha nwekwara ike ịmata ihu nke ọma n'oge a, mana ụfọdụ ndozi ka na-arụ ọrụ, dịka ọmụmaatụ mgbe ejiri facemasks mee ihe, ọ bụ naanị akụkụ nke ihu ka a na-ahụ anya.
Trezọ 5: Teknụzụ Blockchain Teknụzụ na Digital Asset Management
Omume nke ise anyị maka 2021 bụ teknụzụ blockcheni. Nke a abụghị naanị n'ihi ịrị elu nke bitcoins, ebe ọ dị mkpa iji soro mmepe na azụmahịa, mana n'ihi na anyị kwenyere na teknụzụ nwere ike ịpụta oke na mpaghara ndị ọzọ n'ọdịnihu dị nso, DAM bụ otu n'ime ha.
Site na itinye ngọngọ na nyiwe DAM, ndị ọrụ nwere ike ịnweta njikwa akụ ha karịa, na-enyocha mgbanwe ọ bụla emere na faịlụ. Na ọkwa buru ibu, nke a nwere ike - ka oge na-aga - enyere ndị mmadụ aka, dịka ọmụmaatụ, ịchọpụta ma etinyere onyonyo emebi ma ọ bụ na agbanweela ozi agbakwunyere ya.
Digital Asset Management na-aga n'ihu na-agbanwe, na FotoWare anyị na-eme ike anyị niile iji soro usoro a. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmatakwu banyere anyị na ihe anyị nwere ike ịnye, ịnwere ike iwepụta nzukọ na-enweghị atụ na otu n'ime ndị ọkachamara anyị:
Detuo Nzukọ na Ndị ọkachamara Fotoware DAM
Tags: Adobe Adobe CloudaiAmamịghe echicheblockchainblockchain technologyụdị nkwenyedammmiri njikọtangwanrọ dammmiri na-ewu ewudeloittenjikwa ihe onwunwe dijitalụNjikọ ngwongwo dijitalụ dijitalụdijitalụ management softwareọnọdụ nchịkwa akụ dijitalụfotowareNchịkwaimegaMcKinseyMicrosoft Officepimnjikwa ikikeusoro teknụzụọnọdụ
Amalie Widerberg na-arụ ọrụ dị ka Digital Marketer na FotoWare, onye na-ere ahịa Digital Asset Management (DAM) nke ụwa. O nwere ESST (Society, Science and Technology in Europe) Master degree, ma buru amụma na 2021 nwere ọtụtụ ihe echere maka ebe obibi DAM.